छक्क बहादुरले छक्क तरीकाले प्रम ओलीलाई यसरी छक्याए ! – Online Khabar 24
छक्क बहादुरले छक्क तरीकाले प्रम ओलीलाई यसरी छक्याए !
म्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य छक्क बहादुर लामाले केन्द्रीय सदस्य पद परित्या ग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) ओली पक्षद्वारा केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरिएका लामाले शनिबार केन्द्रीय सदस्य पद परि त्या ग गरेका हुन्।
लामाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य परित्याग गरी नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) पक्षमा यथावत रहने जानकारी गराएका छन्। गत निर्वाचनको जनमतको कदर र हुम्लावासीको सुझावलाई कदर गर्दै ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य परित्या ग गरेको उनको भनाई छ।
चिसो मौसममा हुने जोर्नी र घुँडा दुखाइबाट राहत पाउने १५ उपाय, अवश्य पढनुहोला
उनले आफू ओली पक्षमा लागेको भन्ने बाहिरी हल्लाका पछि नलाग्न र भ्र मा नपर्न सवै पार्टी नेता कार्यकर्ता र हुम्ला वासी लाई आग्रह समेत गरेका छन्। यस्तै नेता लामाले प्रचण्ड नेपालको मुल पार्टी नेपाल क म्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एकता बद्ध भएर बस्न अनु रोध समेत गरेका छन्।
Prevतपाईलाई फिटकिरीका यस्ता चमत्कारी गुणका बारेमा जानकारी छ? छैन भने पढिहाल्नुस
nextजाडो मौसममा कपाल झरेर समस्यामा हुनुहुन्छ? त्यसोभए यसरी धुनुहोस कपाल!